Aoka ho mpanohana ny PixelHELPER
Ataovy azo antoka fa misy tsindry ianao! Mandray anjara amin'ny fientanentan'ny hatezeram-bahoaka ny fanomezana. Ataovy azo atao ny tetik'asa zavakanto sisintany. Aiza koa izao no misy fanentanana be dia be ho an'ny fahalalahana ny kanto sy ny zon'olombelona ho an'ny euro rehetra omena anay.
Mandresy lahatra ny tenanao amin'ny tatitra ataontsika momba ny asantsika mahasoa.
Azafady azafady amin'ny Paypal amin'ny paypal@PixelHELPER.tv na ampiasao ny kaonty Don BosqueHELPER Foundation. Raha te hampiasa ny carte de crédit ianao, ampiasao ny taratasy fanolorana etsy ambany.
Ampidino ny fifandraisana amin'ny kaonty amin'ny endri-tsoratra * .txt
Raha avy any Afrika na any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao ianao, dia mety tsy ho vita ny mandefa vola any Eoropa amin'ny Paypal na ny famindrana amin'ny banky. Ampiasao azafady ny antsipirian'ny kaonty momba ny fikambanantsika "Zombies sans Frontieres" ao Maraoka.
MANAMPY AN'IZAO TONTOLO IREO ASA FANOMPOANA AO AMIN'NY TAFIKA
Ny fanomezana ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa dia azo lazaina ho fandaniana manokana ho an'ny anjaran'ny 20% amin'ny fidiranao.
Ireo fandaniana manokana dia mampihena ny fidiram-bolanao raha toa ka mihoatra ny volan'ny 36 Euro.
Ho an'ny fanomezana ho an'ny 100 Euro dia tsy voatery handefa antontan-taratasy fanohanana ianao. Ny fepetra takian'ny fifanarahana tsotra dia ampiharina amin'ny 200 Euro. Tena ampy tsara ny fanararaotana fivoahana.
Matokia. Mahereza. Mijanona ao rehefa misy vondron'olona vitsivitsy manosika fiovana goavana eo amin'ny fiarahamonina.
Mikarakara printy & fisainana - ampio izahay ankehitriny! Amin'ny maha-mpamatsy anao dia mandray anjara mavitrika amin'ny fientanam-bahoaka ianao - ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa.
Ho resa-pahaizana ankehitriny ary mety ho fanalam-baraka misy sisintany azo atao. Na aiza na aiza dia mbola misy fikomiana sy fikomiana maro ho an'ny Euro rehetra nomena anao eto.
Hahazo gazetiboky mailaka miaraka amin'ny fanentanana amin'izao fotoana izao ianao. Hitanao fa voahitsakitsaka ny zon'olombelona ary tsy misy olona jerena? Miandrandra ny hafatrao izahay! Amin'ny maha mpanohana / mpanome azy dia hahazo ny fahafahana manokana sy manokana ho fandraisana anjara amin'ny hetsika pixelHELPER. Ny fikambanana misy antsika dia manana mari-pankasitrahana mendrika. Noho izany, ny fanomezan-dàlana tsirairay dia ny hetra amin'ny alàlan'ny vola.
Oliver Bienkowski ao anaty resadresaka iray Anke Engelke.
ZDF 37 degre miaraka amin'i PixelHELPER amin'ny ady amin'ny NSA ao amin'ny Masoivohon'i Etazonia.
E-mail ho an'ny mpikambana fanohanana: Oliver Bienkowski, oliver@PixelHELPER.org
FANAMPIM-PANAZAVA IREO 3 HAMPANDROSOANA
Mahomby izahay! Miasa amim-pahasalamana sy mangarahara ary manao tsy misy rafitra fitantanana goavana.
Tena mafy izahay! Amin'ny fanomezana nomenao dia ahafahanao manao fanentanana mahomby ho an'ny zon'olombelona.
Mitazona hatrany izahay! Ny asantsika dia mitaky faharetana sy fofona lava. Amin'ny fanomezana maimaim-poana dia manampy antsika ny mijanona ho mijanona!
DONAT amin'ny US ...
Ny Fondation PixelHELPER dia miadana ary ekena fa mahasoa indrindra.
Ny fanoloran-tenanao dia ny fandoavana hetra.
Faly izahay manome anao receipt fanomezana.
Mazava ho azy, ny fanomezam-pahefana tsy tapaka dia afaka miova na tapitra amin'ny fotoana tsy misy filazana.
Amin'ny alàlan'ny fanolorana mivantana anao amin'ny kaontinay fanomezana dia tsy mandoa ny saram-pandaharana rehetra izahay.
Ny Pixel Foundation Mpanampy manenjika aza manokana sy mivantana amin'ny fanaovana asa soa ao anatin'ny fizarana ny dikan'ny hoe "hetra fikasany" ny hetra fehezan-dalàna. Izany dia araka ny manamarina ny fampahafantarana ny birao famorian-ketra Magdeburg avy any 28. Janoary 2016 afa-miala fikambanana ara-barotra sy ny hetra, satria manompo irery sy mivantana hetra-tombontsoa tsy mitady tombontsoa sy ny fanaovana asa soa ao anatin'ny ny hevitry ny §§ 51 FF. AO.
Ny fanampiana vonjy taitra eropeana manampy fanampiana vonjy taitra mivantana
Hoy i Deutsche Welle momba ny vinavina maivana nataon'i PixelHELPER ho an'i Raif Badawi
Aoka ho mpanohana ny PixelHELPER Desambra 3rd, 2019Oliver Bienkowski